Guddiggii colaada Guriceel oo sheegay in ay meel wanaagsan u marayso howlaha nabadeynta ah – Radio Muqdisho
Guddiggii colaada Guriceel oo sheegay in ay meel wanaagsan u marayso howlaha nabadeynta ah
Guddigga loo saaray dib u heshiisiinta iyo nabadeynta dhinacyadii ku dagaalamaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ee barrtamaha Soomaaliya ayaa maanta ka warbixiyay howlihii dhex dhexaadinta ahaa ay halkaasi ka sameynayeen maalmihii la soo dhaafay.
Maxamed Axmed Caalim oo ah Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug isla markaana ah gudoomiyaha guddigga nabadeynta dagaalkii Guriceel oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in howsha nabadeynta ah meel wanaagsan u marayso isla markaana labadii garab ee ku dhowaan ku dagaalamay deegaanka Guriceel ay ka ogolaadeen in ay xabadda joojiyaan si shuruud la’aan ah.
Guddoomiye Caalim ayaa intaa ku daray in talaabadda xigta oo ay hadda wadaan ay tahay sidii dadkii magaalada ka cararay dib ugu soo laaban lahaayeen guriyahooda maadaama ay ku dhibaataysan yihiin meelaha howdka ah.
“Waxaan ku dadaalaynaa sidii qof Soomaali ah mar kale uusan dagaal ugu dhiman la aheyn anganoo Ilaah talo saaranayna, dadka deegaanka si wanaagsan ayay soo dhaweeyeen waad u mahadcelinayaa” ayuu yiri Guddoomiye Caalim.
Guddoomiyaha guddigga dib u heshiisiinta nabadeynta dagaalkii Guriceel Maxamed Axmed Caalim ayaa sidoo kale waxaa uu baaq u direy dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada gobolada dhexe in ay yimaadaan isla markaana ka qeyb qaataan howlaha nabadeynta ah.
Wasiirka Gaashaandhigga oo baaq u jeediyay maleeshiyaadka ay qaldeen kooxda Shabaab
Sanad guuradii 55 aad ee Ciidan Cirka Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabtay